Published 25 August 2020 1 min read
धेरै खेलाडिहरूले करियरको क्रममा केवल केही रेडकार्डहरू प्राप्त गर्छन्। कुनै पनी अप्रिय घटना हुन नदिन तथा खेललाई नियन्त्रण गर्न रेडकार्ड रेफ्रीको लागि अन्तिम प्रयास हुनसक्दछ।सामान्यतया, रातोकार्ड सम्म पुग्ने घटनाहरू अन्जानमा हुन्छन् - लगभग हास्यास्पद। तथापि, केही खेलाडिहरू रेडकार्डहरू प्राप्त गरेरै करियर बनाएको जस्तो देखिन्छ। उनीहरु सर्वव्यापी रुपमा रेडकार्ड खान मात्र राम्रो जस्तो देखिन्छन्।
फुटबल ईतिहासमा सबै भन्दा बढी रेडकार्ड खाने खेलाडीहरूकाे बारेमा हामीले खाेजी गरि तथ्यहरू प्रस्तुत गर्ने काेशिस गरेका छाैँ।
सबै भन्दा बढी रेडकार्ड खाने खेलाडिहरु
10. विन्नी जोन्स , इङ्ल्यान्ड (१२ रेड कार्ड )
विन्नी जाेन्सलाई रातो कार्ड खाए बापत कुनै दु:ख थिएन । उनको प्रत्येक फल प्रतिकारको परिणाम भन्न सकिन्छ । यो व्यवहारले उनलाई आफ्नो फुटबल सीपको लागि मान्यता प्राप्त खेलाडी हुनबाट रोकेको थियो। अर्कोतर्फ, उनीलाई आफ्नो फुटबल करियरमा १२ रेड कार्ड देखेको पनि याद छ।
उनले लीड्स युनाइटेड, चेल्सी एफसी, विम्बल्डन एफसी र क्यूपीआर जस्ता धेरै महत्वपूर्ण टोलीका लागि खेले। यी टोलीहरूमा, उनी राम्रो सीपको खेलाडी हुन् भन्ने प्रमाणित गरेका थिए।
9. मौरिसियो पोचेटिनो,अर्जेन्टिना (१३ रेड कार्ड )
फुटबल खेलको इतिहासको एक सबै भन्दा महत्वपूर्ण खेलाडी पोचेटिनो हुन्। उनी एक खेलाडीको रूपमा सफलता र एक फुटबल प्रबन्धकको रूपमा आफ्नो जीतको लागी विश्वव्यापी मानिएका छन् । जे होस्, ऊनी फुटबलको इतिहासमा सबैभन्दा बढी रातो कार्ड खाने मध्ये पर्छन।
उनको महान फुटबल कौशलतालाई रातो कार्ड रेकर्डले केही छायामा पार्न खोज्यो, यसले उनलाई सबै प्रशंसकहरुद्वारा अत्यधिक आलोचना गरिएको थियो। उनको प्रतिस्पर्धात्मक खेल अनी आक्रमक शैलीले उन्लाई १३ रातो कार्ड सहित नवाैँ स्थान राख्दछ। उनी फूटबल प्रशिक्षकको रुपमा नि उत्तिकै सफल भए।
8. फिलिप मेलो, ब्राजिल (१४ रेड कार्ड)
मेलो प्रतिभाशाली ब्राजिलियन खेलाडि हुन। आक्रामक शैली, उत्कृष्ट प्रतिभा सबै गुण सम्मिलित छ यी खेलाडीमा। तर उनकाे प्रतिभा लाई उन्को आक्रामक खेल शैलीकाे कारण छायामा परेको छ। कसैले पनि यी खेलाडीको प्रतिभालाई शंका गर्दैन, तर ठूलाे संख्यामा रहेकाे उनका फलहरूले दर्शकहरूले उनकाे प्रतिभालाई बिर्सिएका छन्।
जे होस्, यसले उनलाई उत्कृष्ट खेल करियर बनाउनबाट रोक्न सकेन जसमा उनले धेरै उपाधिहरू प्राप्त गरे।
7. यानिक कहुजैक , फ्रान्स (१७ रेड कार्ड)
यी खेलाडिले आफ्नो करियरमा धेरै हड्डीहरू तोडे। धेरै स्ट्राइकरहरूको स्मृतिमा यी खेलाडिले मैदानमा प्रस्तुत गरेको आक्रामकता ताजै छ। धेरै फ्रान्सेली फ्यानहरूले यी खेलाडीलाई २०१६-२०१७ को सिजनकाे खेलमा रेड कार्डहरू प्राप्त गरेका खेलाडिका रूपमा याद गर्छन्।
यी खेलाडिले आफ्नो खेलजीवनमा १७ रातो कार्ड खाएका छन्। उनी आफ्नो खेल कला भन्दा पनि आक्रमक व्यवहारबाट आफ्नो स्थान जमाउन सकेको कुरा फुटवल खेलका विज्ञहरु बताउछन। फुटबलका विज्ञहरु यी खेलाडीलाई आतंककारीको संज्ञा दिने गर्दछन्।
6. पाब्लो अल्फारो , स्पेन (१८ रेड कार्ड)
खेल जगतको बदनाम खेलाडि मध्ये एक हुन् अल्फारो। मैदानमा प्रवेश हुनासाथ खेलाडीहरू माथिको उनको आक्रमण सुरु हुन्थ्यो। तर उनलाई आफ्नो बदनाम खेलशैली प्रति कहिल्यै पनी अफसोस थिएन न कार्ड खादा नै भएको अफसोस भएको देख्न सकिन्थ्यो। सेभिल्लामा रहँदा उनी टोलीको प्रमुख रोजाइमा हुन्थे। उनलाई खेल जगतमा खेर गएका प्रतिभाको रुपमा लिइन्छ।
5. पाउलाे माेन्टेराे , उरुग्वे (२१ रेड कार्ड)
यिनी विश्वब्यापी रूपमा चिनिएका खेलाडी हुन। जीवनभर खाएका २१ रातो कार्डको ईतिहास उनकाे मुखबाट निस्किने शब्दको अगाडि फिका देखिन्छ। उनी खेल यूद्ध बराबर र आफु याेद्धा बराबर भनेर अन्तर्वातामा बारम्बार भनिरहन्छन्। उनले अन्तर्वातामा खेल जित्नको लागि जे गर्न नि तयार रहेको सुनाउने गर्दथे।
एक अन्तर्वातामा उनले कुनै पनि फलमा अफसोस नभएको बताएका छन । उनी खेलको जितका लागि फल गर्नुपर्ने अनी घृणा गर्नेले गर्छन् तर आफ्नो बिचार परिवर्तन नहुने बताएका थिए ।
4. एलेक्सिस रुआनो डेलगाडो, स्पेन (२२ रेड कार्ड)
धेरै काण्डसँग जोडीएका यी खेलाडि राम्रै चिनिएका खेलाडि हुन्, जो आफ्नो आक्रामक खेलका कारण प्रतिबन्धमा परी रहन्छन । खेल जीवन भर २२ रातो कार्डका खाएका उनलाई हरेक खेलमा आक्रामक व्यवहारका साथ देख्न सकिन्थ्याे। ‌
उनकाे सबैभन्दा सम्झनाको क्षण त्याे हो जब उनले म्यानजुकिकलाई प्रहार गरे। बलमा विवाद पछि, म्यानजुकिकको एक दाबीमा असमर्थन जताउँदै डेलगाडोले उनको अनुहारमा ठूलो चोट पुर्‍याए। ला-लिगामा यो क्षण फ्यानहरूको स्मृतिमा सामिल भयाे। ‌‌
3. सर्जियो रामोस, स्पेन (२६ रेड कार्ड)
फुटबलका प्राय सबै फ्यानहरूले रामोसलाई चिन्छन्। उनलाई विश्वको सर्वश्रेष्ठ डिफेन्डरहरू मध्ये एकका रूपमा चिनिन्छ, उनी २६ रातो कार्डको साथ यस श्रेणीको हिस्सा हुन । उनको क्यारियर अझै विकास भइरहेको छ, त्यसैले उनी पक्कै पनि यस श्रेणीमा आरोहण जारी राख्नेछन। ‌‌
यी उत्कृष्ट डिफेन्डरसँग प्रतिभाको अभाव छैन। तर उनकाे मनोवृत्तिले उनलाई निरन्तर असर गरिरहेको छ। उन्को आक्रामक र लडाइपूर्ण चरित्र, सन्काहा व्यवहारले उनलाई मैदान बाहिर पुर्याइरहन्छ। यिनले बार्सिलोना र रियल मड्रिड बीचकाे हरेक खेलमा रातो या पहेलो कार्ड खाने गर्दछन्।
‌‌रमोसको खेल व्यवहार सुध्रियोस भन्ने सम्पूर्ण फूटबल खेलप्रेमीको चाहना छ। के उनी आफ्नो आक्रामकता अनी प्रस्तुत हुने शैली परिवर्तन गर्लान् त?
2. सिरिल रुल , फ्रान्स (२७ रेड कार्ड)
यी फुटबलरलाई परिचय दिन कुनै शब्द छैन। एकमात्र कारण हो कि उनी यस खेलमा चिनिएका छन् आफ्नो निरन्तर र आपराधिक फलहरूका लागि। शायद कराँते या तेक्वान्दाेमा राम्ररी ध्यान दिएका भए उनी सफल हुन्थे भन्ने चाँही उन्को किकहरुले जनाउँछ। यी खेलाडिका कारण उनका सबै विपक्षीहरूले आफ्नाे खुट्टामा किक खाएका छन। कुनै कुरा छ जसमा उनी कुशल छन् भने, उनले आफ्ना विपक्षीहरूलाई कडा हिर्काउनु हो। प्रत्येक पटक जब उनी खराब आचरण गर्नसक्थे, उनी रेफ्रीको निर्णयको पर्वाह नगरी यसलाई पूरा गर्थे। ‌‌
यस कारणले गर्दा, उनलाई खेल मैदानमा उभिनबाट रोकीएको थियो। उन्ले आफ्नो क्यारियरमा २७ रातो कार्ड प्राप्त गरे ।
1. गेरार्डो बेदोया ,कोलम्बिया (४६ रेड कार्ड)
यी काेलम्बियन फुटबल खेलाडि फुटबलको सबैभन्दा ठूलो अज्ञात खेलाडी मध्ये एक हुन। यो कसैलाई थाहा छैन कि एउटा टोलीले उसको प्रारम्भिक ११ मा उनको खतरनाक प्रदर्शनहरू देखेर पनि किन राखे। इतिहासका कुनै पनि खेलाडि यी मिडफिल्डरले राखेकाे रेड कार्डको संख्यामा पुग्न सक्षम हुने छैनन् भन्ने अनुमान छ। उनको खेल अत्यन्त हिंस्रक थियो। उन्को वरीपरी बल पुगेमा पक्कै फल हुन्थ्यो। कुनै स्ट्राइकरले चोटपटकको डरले गर्दा बेडोयाको अगाडि पछाडि बल पार गर्न चाहदैन थिए।
उनीसँग गम्भीर मनोवृत्तिगत समस्याहरू थिए। उनी सँधै प्रतिद्वन्द्वी खेलाडिहरूसँग मैदानमा लडाईमा सम्मिलित हुन्थे। यी खेलाडिसँग भएको रीसको थोरै नियन्त्रण, उनकाे असुरक्षित फलकाे अर्को ठूलो कारण थियाे।
यी सबै दोहोर्याइएका विफलताले उनलाई रेडकार्डकाे अग्रस्थानमा पुर्याउन सहयाेग गर्याे। उनी फुटबल खेलकाे इतिहासमा सबैभन्दा बढी रातोकार्ड पाउने खेलाडि बन्न पुगे । यी खेलाडिले आफ्नो फुटबल करियर छोड्दा उनका प्रतिद्वन्दिहरू शान्त वातावरणमा मैदान प्रवेश गर्न पाउँदा खुशी देखिन्थे।
आदरणीय राष्ट्रिय खेलकुद परिसद तथा सम्माननीय सरकारलाई मेरो सानो खुल्ला पत्र लेखन चाहन्छु। म नेपाली राष्ट्रिय टोलीको तर्फबाट कप्तान किरण चेम्जोङ। आपनो व्यक्तिगत तर्फबाट र एन्फाको तर्फबाट सरकारलाई के सम्झाउन चाहन्छु भने फूटबल मात्रै नभएर सम्पूर्ण खेलकुद गतिविधि सबै मापदण्ड पूरा गरि पुर्ण सुचारु गर्…
एजेन्सी | यूईएफए गोल्डेन बोई अवार्डका लागि २० युवा खेलाडीको सूची सार्वजनिक भएको छ । यूईएफएले बिहीबार युरोपियन क्लब फुटबलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने २० युवा खेलाडीको सूची सार्वजनिक गरेको हो । यूईएफएले सार्वजनिक गरेको सूचीमा बोरुसिया डर्टमण्डका अर्लिङ हालाण्ड, डर्टमण्डको जाडोन सान्चो, बार्सिलोनाका अन…
यो सामग्री ईन्टरनेटमा प्राप्त युट्युब तथा बिभिन्न अधिकारिक स्ट्याट्स सङ्ग्रहक साईटबाट तयार पारीएको हो । आफ्नो प्रतिकृया दिन नभुल्नुहोला । दरबार टाईम्स